Vaovao - Akanjo fiarovana
Ampinga tarehy fitsaboana
Robot famonoana otrikaretina
Akanjo fiarovana azo araraotina novokarin'i Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd., mpanamboatra akanjo fiarovana azo arahana fanafody, famokarana lehibe, fandefasana haingana! Vita ny taratasy fanamarinana, ny fanamarinana EU CE, ny fanamarinana roa sosona an'ny US FDA. Fanamarinana fitantanana kalitao ISO9001, fanamarinana kalitao 13485 fanamarinana, fanamarinana EN14683, fenitry ny vokatra mifanaraka amin'ny GB19082-2009, Tongasoa anay hifandray aminay amin'ny fiaraha-miasa!
Firafitry ny vokatra:
1. Ny akanjo miaro dia misy rafitra iray izay misy satroka, palitao ary pataloha.
2. Firafitra mirindra, mora hitafy, tonon-taolana tery.
3. Ny cuffs, ny fisokafan'ny kitrokely, ary ny fanokafana satroka dia mihidy amin'ny fatorana elastika.
Ny fiasan'ny fitaovana SFS: Izy io dia vokatra mitambatra amin'ny membrane breathable sy ny lamba spunbonded, miaraka amin'ny fiasan'ny rivotra sy ny rano. SFS (mafana miempo ddhesive mitambatra): vokatra mitambatra sarimihetsika isan-karazany sy lamba tsy tenona.
fampahatsiahivana: (Ny akanjo miaro amin'ny vita amin'ny fitaovana hafa dia azo namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa tsirairay)
Araho ny dingana eto ambany hanalana ny akanjo miaro:
1. Avelao ny toeram-piasana na "faritra mafana" rehefa misy rivotra ampy amin'ny akanjo miaro, mba hialana soa aman-tsara ny fandotoana, ary ny fitafiana miaro dia tokony esorina ara-potoana.
2. Raha mifandray amina akora simika misy poizina ilay akanjo miaro dia esory aloha ilay izy, ary esory.
3. Esory ny akanjo arovana miaro ny akanjo miaro. Aza mikasika ny toerana mety ahalotoan'ny akora simika ny akora simika.
4. Raha azo atao dia tanteraho tanteraka ny detoxification, ny fanadiovana, ny fizahana ary ny fitsapana ny tsindry ataon'ny rivotra miaro ny akanjo miaro azo ampiasaina indray.
5. Raha tsy azo esorina ny akanjo miaro dia tokony ariana amin'ny fomba azo antoka ny akanjo miaro.
Ny akanjo miaro dia vita amin'ny robina sy polymer isan-karazany. Tsy ampy ny angona momba ny fiainana talohan'ireto fitaovana ireto amin'izao fotoana izao. Tokony hiorina amin'ny fampiasana akanjo fiarovana. Rehefa afaka 5 taona dia hampiasaina ho toy ny palitao miaro simika «fiofanana manokana» izy io.
Tokony hotehirizina amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, lavitra ny tara-masoandro mivantana.
Ny fitafiana miaro dia azo tehirizina mivantana ao anaty kitapo fonosana voalohany na apetraka eo ambonin'ilay lamba mihantona mba hipetrahana.